KUHLONGOZWA UKUTAKULA OSOMABHZINISI ABAKHAHLAMEZEKILE KWADUKUZA – Sivubela intuthuko Newspaper
INHLANGANO yezamabhizinisi yaKwaDukuza enyakatho yeKwaZulu Natala, iKwaDukuza Municipality Youth Busines Forum (KDMYBF) itgi izibophezele ekutheni isebenzisane noMkhandlu waKwaDukuza ngenhloso yokutakula osomabahiziniosi abancane bakule ndawo abakhahlanyezwe yizibhelu zakamuva ezibonakale zikhinyabeza amabhizinisi amaningi kakhulu iakhuukazi KwaZulu Natal kanye naseGoli.
Le nhlangano ithi kumqoka ukuthi kube khona okwenziwa ngenhloso yokufukula osomabhizinisi abancane bakule ndawo. Ngokusho kwabo ukukhahlmezeka kosomabhizini abancane kuyinto engagcina iba nomthelel ongemuhle nje nhlobo ikakhulukazi kumnotho wakuleli dolobha.
UMnuz Menzi Zulu oyisekela Sihlalo kule nhlangano uthe namanje basashaqekile kakhulu ngomonakalo abawubonile ezitolo zaKwaDukuza. Uthe bazinikeze isikhathi bahambela idolobha lonke laKwaDukuza bazibonela ngawo ukuthi lukhulu usizo okufanele kulekelelwe ngalo osomabhiinisi abancane bakule ndawo.
Ugcizelele ukuthi osomabahzinisi abancane bangumgogodla waKwaDukuza. Wathi ngaleyo ndlela kumqoka ukuba balekelelwe uma kunesidingo sokuba kweniwe kanjalo. Uthe umonakala ngaphakathi edolobheni lakwaDukuza uze wakapakele nasezindaweni eziningi ezakhele le ndawo.
Ubale lezi zindawo ezilandelayo IThethe, Melville kanye naseThembeni. “Sinethemba elikhulu lokuthi kukhona okuzokwenzeka ngenhloso yokulekela osomabhizinisi bakuleli dolobha. Indlela okonakle ngayo iyethusa kakhu,’’usho kanje.
Uthe kulokoza inhlansi yethemba ngokuthi uMasipala wakwaDukuza nawo uzimisele ngokuphonsa isandla ukuze kuqiniskiswe ukuthi leli dolobha libuyela eimweni esijwayelekile ukuze nomnotho ungeke uze ukhinyabezeke kalula.
“Okuyikhona okumqoka kakhulu ikahulukazi ngalesi sikhathi ukuqinisekisa ukuthi umnonakalo uyanqandeka kakhulu ungagcini sewubonakala sewuphuma esandleni Ukulekelelwa kosomabhizinisi abancane kungadala ukuthi umnotho weDolobha usheshe ubonakale ubuyela esimweni okuyinto engikholwa ukuthi sonke siyibhekile ngamehlo abovu,’’usho kanje.